के तपाइँलाई करेला मनपर्छ ? यस्ता छन् करेलाको फाइदा बेफाइदा – Saurahaonline.com
के तपाइँलाई करेला मनपर्छ ? यस्ता छन् करेलाको फाइदा बेफाइदा
खादा तितो भएकाले नै धेरैले खान मन नपराउने तरकारीको रुपामा प्रयोग गर्ने तिते करेलाको फाइदा, बेफाइदाहरु लगायत कस्ता व्यक्तिहरुका लागि गुणकारी हुन्छ र कस्तालाई हानिकारक हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौ।
तीते करेलाको फाईदाहरु
– खानामा रुचि बढाउँछ ।
– तीतेकरेलाको पात पिसेर लेप बनाएर लगाएमा छालाको सङ्क्रमण, चिलाउने खटिरा, घाउ आदिलाई हटाउँछ ।
– खाएको कुरा राम्ररी पचाउँछ ।
– पेटसफा राख्दछ ।
– कब्जियत हुन दिँदैन ।
– पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै, ग्याष्ट्रिक, अल्सर आदिलाई कम गर्दै लैजान्छ ।
– रगत शुद्धीकरण गरी सफा राख्न मद्दत गर्छ ।
– मधुमेह रोगीले तीतेकरेलाको धूलो बिहानबेलुका एक एक चम्चा खाइदिएमा यसले इन्सुलिनको काम गर्छ ।
– यसले छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगजस्तै यस्तै हात खुट्टाका जोर्नी दुख्ने वा बाथ रोग भएको, पिसाब पोल्ने, पत्थर भएका, अम्लपित्त, हैजाजस्ता रोगमा करेलाको सेवनबाट फाइदा गर्छ ।
– तीतेकरेलालाई उमाल्दा यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट उत्पन्न हुन्छ, जसले क्यान्सरको सम्भावनालाई घटाउँछ ।
– तीतेकरेलाको जरालाई पिसेर लेप बनाएर पाइल्समा लगाए यसले फाइदा गर्छ ।
– तीतेकरेलाको जराको रसमा बराबर मात्रामा मह वा तुलसीको रस मिसाएर दिनहुँ राति एक महिना जति खाएमा श्वासप्रश्वास समबन्धी रोग जस्तै चिसो लाग्ने, दम, ब्रोन्काइटिस, घाँटीको रोग आदिबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । करेलाको दिनहुँ सेवनले शरीरको तौल कम गर्न वा घटाउन मद्दत गर्छ ।
तीते करेलाको बेफाईदाहरु
(गर्भवती महिलाले तीतेकरेलाको सेवन गर्नु उचित हुँदैन । यसको सेवनले गर्भवती महिलाहरूको गर्भपतन वा रक्तश्राव हुने सम्भावना हुन्छ ।
यसको बढी सेवनले पेटदुख्ने र झाडा हुने सम्भावना हुन्छ ।
– रक्तअल्पता ९एनिमिया० भएका र कमजोर व्यक्तिलाई भने तीतेकरेलाको नियमित सेवनले रिँगटा लाग्ने र अझ कमजोर हुने गरेको पाइन्छ ।
तीतेकरेलाको बियाँको घेरामा हुने तत्वले साना बालकहरूलाई विषादिको काम गर्छ।
व्लड प्रेसर लो गराउछ।
तिते करेलामा पाइने तत्वहरु
भिटामिन बि १
भिटामिन बी २
कपर तथा फोस्फोरस
करेला विभिन्न रोगका लागि उपयोगी खानेकुरा हो । तिते करेला कस्ता व्यक्तिहरुका लागि कसरी उपभोग गरेमा गुणकारी साबित हुन्छ। तिते करेलाको गुणहरुका बारेमा चर्चा गर्दै छौं ।
तिते करेलाका १२ गुण र प्रयोग गर्ने बिधिहरु
१० श्वासप्रश्वास समस्यामा
ताजा करेला दम, रुघाखोकीजस्ता श्वासप्रश्वासको समस्या भएकाहरुका लागि करेला निक्कै गुणकारी हुन्छ। यसको सेवनबाट यस्ता प्रकारका रोगहिरलाई केहि राहत मिल्न सक्छ ।
२० लिभर टनिक
दैनिक एक गिलास करेलाको जुसले कलेजोको समस्या समाधान हुन्छ । स्वास्थ्यमा परिवर्तन आएको हेर्न कम्तीमा पनि एक साता करेलाको जुस पिउनै पर्ने हुन्छ ।
३० रोग प्रतिरोधक
करेलाको सेवनले डण्डीफोर, दागलगायतका छालाको संक्रमण हटाउनुका साथै रगतमा भएको अनियमितता हटाउछ । कागती मिसाएको करेलाको जुस ६ महिनासम्म खाली पेटमा खानाले अनुहारको सुन्दरतामा निखार ल्याउछ ।
करेलाको जुसले टाइप टु मधुमेहलाई सबैभन्दा बढी लाभ मिल्छ । चिनिया र भारतीय प्राचिन चिकित्सा पद्दतिमा करेला लामोसमयदेखि प्रयोग हुँदैं आएको विश्वास गरिन्छ । हालै भएका अनुसन्धानले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । इन्सुलिनको अभाव वा विकासका प्रतिरोधकका कारण कोषहरुले रगतबाट सुगरको मात्रा लिन असफल भएमा टाइप टु मधुमेह लाग्छ । दुवै अवस्थामा कोषहरु सुगर लिन असमर्थ रहन्छन् । किनासे नामका प्रोटिन सक्रिय नहुँदा कोषले सुगर लिन नसक्ने भएकाले करेलाले किनासेहरुलाई सक्रिय बनाउछन् । करेलामा रहेका केही रासायनिक तत्वहरुले पनि इन्सुलिनको जस्तै काम गर्छन्, जसले रगतमा सुगरको मात्रा कम गर्न मद्दत गर्छन् ।
७० मिर्गौला र ब्लाडर
८० मुटुको रोग
करेलाको सेवनले क्यान्सरका कोष वृद्धि हुनबाट जोगाउछ ।
१०० तौल घटाउन
११० छालाको समस्यामा स्
१२० कपाल चम्काउन
करेलाको रसमा एक कप दही मिसाएर लगाउनुस् र केही समयपछि धुनुस, यसले कपालमा प्राकृतिक चमक आउछ । करेलाको जुसले कपाल झर्ने समस्या पनि हटाउछ । करेलाको जुसमा चिनी मिसाएर लगाउनाले कपाल झर्ने समस्या समाधान हुन्छ ।